« Collection Raparivo artiste peintre »: « Fiofon’ny rainy mankany amin’ny zanany » | NewsMada
« Collection Raparivo artiste peintre »: « Fiofon’ny rainy mankany amin’ny zanany »
Nanomboka, omaly ao amin’ny Ivontoeran’ny kolontsaina malagasy (IKM) Antsahavola, ny fampirantiana hosodoko « Collection Raparivo artiste peintre ». Hetsika hoenti-mampita hevi-dehibe telo raha ny fanazavan’i A. Raparivo.
« Vanim-potoana fiofon’ny rainy mankany amin’ny zanany », hoy izy. Notsiahiviny tamin’izany ilay fanambarana tamin’ny taona 2017 nilaza ny tsy fanaovan-dRaparivo R.R tabilao intsony. « Iraka noraisiko ny hanohy izay niandohan’ny raiko. Hosodoko atao amin’ny antsikely. Fanaovana ny “style classique figuratif” », hoy i A. Raparivo. Hevi-dehibe faharoa, hoenti-maneho ireo tabilaon-dRaparivo R.R natao « reproduction ». « Ho afaka hanana hosodoko ny tokantrano malagasy vokatry ny fampiasana io fomba io », hoy izy. Hanana tsena hosodoko ny sarambabem-bahoaka, raha ny fanazavany hatrany. Fahatelo, nanambarany ny momba ny fahasalaman-dRaparivo R. R : « eo am-pitsaboana azy izahay », hoy ity zanany ity.
Tabilao 43 no miranty eny an-toerana ka ny 12 amin’ireo, sanganasan-dRaparivo R.R. Ny tabilao 20, hosodokon’i A. Raparivo. Ao koa ny « style batik », ahitana ny sanganasan’i Zakaranda ary ny « horigamie » izay zavakanto japoney miainga avy amin’ny fahaizana mampiasa ny rantsan-tanana hamolaka ny taratasy ho tonga kisarisary samihafa. Ny 15 septambra vao hifarana ity varotra fampirantiana ity.